किन शास्त्र र आयुर्वेदमा दिउँसोमा सुत्न अनुचित मानिएको छ? » Khash Khabar
गृह किन शास्त्र र आयुर्वेदमा दिउँसोमा सुत्न अनुचित मानिएको छ?
२४ जेष्ठ २०७८, सोमबार १०:०७
तर केही मानिसका लागि अलिकति आराम गर्नु पनि राम्रै हुन्छ । विद्यार्थीहरूले लगातार कैयौं घन्टा पढेपछि आराम गर्नका लागि दिउँसो एक झप्को लिनु ठीकै हुन्छ । वृद्धहरूका लागि पनि शरीर र मस्तिष्कलाई आराम दिनका लागि दिउँसो सुत्नु ठीक हुन्छ ।
असाध्यै क्रोधी मान्छेले पनि दिउँसो सुत्दा दिमाग शान्त हुन्छ । कडा शारीरिक मेहनत गर्ने मानिसले पनि शरीरका अंगलाई आराम दिन दिउँसो सुत्दा हुन्छ ।